Uyigugisa njani ifoto ngeAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nge-Photoshop kunokwenzeka ukuba uphinde ufake ifoto yakho kwaye uyigqibe ngokufana nefoto yakudala.
Uyigugisa njani ifoto ngeAdobe Photoshop ngendlela elula yokufumana ukubamba okwahlukileyo kwiifoto zakho. Wonke umntu uthetha ngokubuyisela ifoto endala, kodwa kuya kuthini ukuba sifuna ukwenza okwahlukileyo? ukuguga ifoto ebukhali ngokugqibeleleyo. Inokwenziwa kwaye uya kufunda ukuyenza kule nto post.
Ifoto endala ayisiyonto ngaphandle kwesiphumo sokuhamba kwexesha kwiikhemikhali ezahlukeneyo ezimiselwe kwiphepha lokufota, iqhinga jonga ukuba injani ifoto endala kwaye usebenzise olo tshintsho kwiifoto ezingadalanga.
Kuthekani ukuba sifuna ukuguga ifoto endaweni yokuyibuyisela? asinakuyenza? ewe ewe, singayenza kwaye Siza kuyenza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo bonisa izixhobo abaya kuthi babenakho ukuzenzela imifanekiso yabo ekugugeni.
Kule nto isikhundla Siza kusebenzisa ezi zixhobo zilandelayo de Ifotohop:
Hlengiso hlengiso: ukukhanya kunye nokwahluka, umbala, ukugcwala, amanqanaba, mnyama nomhlophe.
Siza kufunda oku kulandelayo:
Guqula umbala womfanekiso
Faka isicelo kumfanekiso
Phinda ubeke kwakhona iiparameter ezisisiseko umfanekiso kunye nezixhobo eziphambili
0.1 Jonga iimbekiselo ezibonakalayo zeefoto ezindala
1 Uhlobo lokuqala kumfanekiso wobudala
1.1 Umaleko wohlengahlengiso lwe-hue
1.2 Faka isicelo kumfanekiso
1.3 Imimandla emnyama yesithombe
1.4 Khanyisa iindawo zesithombe
2 Uhlobo lwesibini kumfanekiso wobudala
2.1 Guqula umfanekiso ube mnyama nomhlophe
2.2 Guqula ukukhanya kwemifanekiso
Jonga iimbekiselo ezibonakalayo zeefoto ezindala
Into yokuqala ekufuneka siyenzile xa kufikwa ekugugeni ifoto kukwazi injani ifoto endala, ngale nto siyayifuna iimbekiselo ezibonakalayo singabona ntoni kuyo Google.
Into elandelayo ekufuneka siyenzile Khuphela ubume obuthile ukusifaka kwifoto kwaye siyenze ibonakale indala, kuba sinokusebenzisa naluphi na uhlobo umfanekiso weBhanki okanye jonga ngqo kwi I-Googlkunye nokuqinisekisa ukusebenzisa ukhetho ukusebenzisa ngokukhululekileyo ukufota.
Xa sele sinendawo enye okanye nangaphezulu, into elandelayo esiyenzayo vula umfanekiso wethu kwi Photoshop kwaye uqale ukusebenza. Singasebenzisa naluphi na uhlobo lomfanekiso kwi-Intanethi ukuziqhelanisa ngaphambi kokusebenzisa eyethu, kule meko sisebenzise umfanekiso ovela kwimovie Eda ucacise kutheni oku kuyimpazamo.
Uhlobo lokuqala kumfanekiso wobudala
Kule posi siza kubona iindlela ezimbini zokudala umfanekiso, kolu hlobo lokuqala into esiya kuyenza yile sebenzisa ubume kumfanekiso wethu ukuhlonipha umbala (kule meko ithoni yesepia) kwinguqulelo elandelayo siza kuyenza Inguqulelo emnyama nomhlophe.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuvula umfanekiso wethu we-Photoshop.
Umaleko wohlengahlengiso lwe-hue
Senza uluhlu lweethoni lokugcwalisa ukutshintsha imibala yomfanekiso wethu, kule meko siza kunika umfanekiso wethu a sepia ithoni yeorenji. Ukwenza oku kuya kufuneka ucofe kulungelelwaniso lokhetho kwindawo yomaleko kwaye ujonge Umaleko wokuhlengahlengisa i-hue. Ngaphakathi kolu luhlu sicinezela ibhokisi yemibala kwaye sitshintshe imibala yefoto yethu njengoko ubona emfanekisweni.
Xa sele senziwe umaleko, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile sebenzisa ubume kumfanekiso wethu ukufumana isiphumo esidala.
Ukufaka ubume kumfanekiso, konke ekufuneka sikwenzile kukuba tsala ubume bethu kwaye uyibeke ngaphezulu komfanekiso wethu. Nje ukuba sibe nayo ubume obungaphezulu kwesithombe sethu into esiza kuyenza kukutshintsha i imo yomaleko ukusuka kwisiqhelo ukuphinda-phinda.
Imimandla emnyama yesithombe
Xa ukufakelwa kusetyenziswa, into elandelayo esiza kuyenza yile sebenzisa izithunzi ukwenza mnyama iindawo ezithile zomfanekiso wethu, into eqhelekileyo xa sibona umfanekiso omdala kukuba unawo iindawo ezimnyama kunezinye.
Ukufumana mnyama iindawo ezithile kumfanekiso esiya kuwusebenzisa Uluhlu lohlengahlengiso lwejika kwimowudi yokwaleka okuphindaphindayo, xa sinolu luhlu siza kucinezela control + i indlela emfutshane ukuguqula umaleko. Ukusebenza kolu luhlu kulula kakhulu kuba isebenza njengebrashi, Sitshintshe imo yobulukhuni kunye nobukhulu ukuze bulingane nomfanekiso wethu. Umxholo ngu Sebenzisa ukungabonakali okuphantsi ukwenza utshintsho kancinci kancinci.
Emva kweendawo ezimnyama zomfanekiso wethu, into elandelayo ekufuneka siyenzile ichasene, cacisa iindawo yomfanekiso wethu.
Khanyisa iindawo zesithombe
Ukucacisa imimandla yefoto into ekufuneka siyenzile yile yenza umaleko wokuhlengahlengisa ijika kwaye utshintshe imo ungqimba ukusuka kwinto eqhelekileyo ukuya kuthiba, xa sele sinomaleko sicinezela el ulawulo olufutshane + i ukuyibuyisela umva. Ngoncedo lwebrashi sipeyinta ezo ndawo sifuna ukuzicacisa kumfanekiso wethu.
Emva kwala manyathelo Sikwazile ukuguga ngokomfanekiso wethu iminyaka embalwa, akunjalo? ngokuqinisekileyo amashumi athile eminyaka.
Uhlobo lwesibini kumfanekiso wobudala
Kule ndlela yesibini siza kuguqula eyethu umfanekiso omnyama nomhlophe ukufaka ezinye iintlobo zeziphumo zokufumana ifoto eyahlukileyo.
Ukuguqula umfanekiso wethu umnyama nomhlophe into ekufuneka siyenzile yenza umaleko wohlengahlengiso omnyama nomhlophe kwifoto yoqobo.
Xa sinomfanekiso omnyama nomhlophe sinokuqala ukusebenzisa la mahlengahlengiso ukuze siqhubeke nokuguga.
Guqula ukukhanya kwemifanekiso
Kule ndawo siza kutshintsha iifayile Ukuqaqamba nokungafani yomfanekiso wethu ukuze senze umfanekiso ukhanye ngokungathi yinto ethile kutshiswe ngokukhanya okugqithileyo.
Into elandelayo esiyenzayo tshintsha amanqanaba emifanekiso ukufumana izibane kunye nezithunzi ukuba zenze ikhontrakthi ngakumbi. Sakha i uhlengahlengiso lwamaqondo omaleko kwaye silungisa iiparameter njengoko ubona ekubambeni.
Into elandelayo esinokuyenza mnyama kwaye ukhanyise iindawo ukudala uhlengahlengiso maleko Phinda-phinda kwaye yila indlela yejika. Siza kusebenzisa uhlengahlengiso olugobileyo Phinda imowudi ibe mnyamaIindawo zomfanekiso wethu, iyelenqe eliphumelelayo kukucacisa.
Amathuba emifanekiso yokuguga ahluka kakhulu kuba ixhomekeke kakhulu kwinto esiyikhangelayo, ngala manyathelo amancinci oza kuwafumana yenza zonke iintlobo zeefoto ezindala ukuba uqala ukungxama ngeeparameter zazo zonke izixhobo esizibonileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Uyigugisa njani ifoto ngeAdobe Photoshop